”बिदेश जान्छु” भनेर हिडेका श्री’ मानले यो के गरे ? ३ बर्षदेखि सम्पर्क बिहिन (भिडियो हेर्नुस) – Ap Nepal
”बिदेश जान्छु” भनेर हिडेका श्री’ मानले यो के गरे ? ३ बर्षदेखि सम्पर्क बिहिन (भिडियो हेर्नुस)
मोरङ जिल्लाको पथ्री शनिश्चरे वडा नम्बर ३ निवासी एक महिला तिनबर्षअगाडि आईतवहादुर बिक नाम गरेका श्रीमान बिदेश जान्छु भनेर अर्कै महिलासँग फ’रार भएको बताउँदै आफ्नो श्रीमानको खोजी गर्दै सहयोगको अपेक्षाका साथ मिडियामा आएकीछिन ।
आफु नराम्री भएकोले श्रीमानले अर्कै केटी लिएर हिडेको होला भन्दै निकै मन पनि दुखाईन उनले । एक सन्तानकी आमा उनि अब भने श्रीमानसँग थाकीसकेको र श्रीमानले डिभोर्स नै चाहे पनि दिन तयार रहेको बताईन । न्यायको खोजीमा वडादेखि लिएर प्रहरी कार्यलयसम्म धाएको उनको भनाई छ ।
श्रीमानले आफ्नो हकअधिकारका कुरालाई समेट्नुपर्ने र नानीको पालनपोषणको लागि सम्पुर्ण खर्च बेहोर्नुपर्ने उनको भनाई छ । श्रीमानले दोस्रो बिबाह गरेर एक छोरा पनि जन्माईसकेको उनको भनाई छ तर श्रीमान भने बिगत तिनबर्षदेखि सम्पर्कबिहिन रहेको उनले बताईन ।
बाँकी हेर्नुस तलको भिडियोमा…
यो पनि… — बारामा एक किशोरीलाई सामूहिक बला’ त्कार गरेर जबरजस्ती ग’ र्भपतन गर्न लगाइएको घटना सार्वजनिक भएको छ । प्रसौनी गाउँपालिका–५ प्रस्टोकाकी १६ वर्षीया किशोरीलाई प्रसौनी गाउँपालिकाकै वडा नम्बर २ का २६ वर्षका भोला भन्ने दिपक साह र श्यामसुन्दर साहले तीन महिनाअघि सामूहिक ब’ला’ त्कार गरेका थिए ।
ब’ला’ त्कारपछि गर्भवती भएकी ती किशोरीलाई आरोपित दुवै युवकले शनिबार राति घरबाट जबरजस्ती डाक्टर ओमप्रकाश महतोकोमा लगेर गर्भ’ पतन पनि गराएका छन् । राति अचेत बनाएर गर्भ’ पतन गराएपछि होसमा आएर घर फर्किएकी ती किशोरीले आफुसँग भएको ज्यादतीबारे अभिभावकलाई जानकारी गराएपछि घटना बाहिर आएको हो ।
आइतबार पीडित किशोरीका अभिभावकले आरोपित दुवै युवक र गर्भप’ तन गराउने डाक्टर महतोविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा किटानी जाहेरी दिएका छन् । किटानी जाहेरी परेका आरोपित दुवै युवक र डाक्टर महतो फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरूको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी प्रवक्ता एवं। प्रहरी नायव उपरीक्षक राजेश थापाले जानकारी दिए । पीडित किशोरीको आइतबार दिउँसो प्रादेशिक अस्पताल कलैयामा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर प्रहरीकै संरक्षणमा राखिएको थापाले बताए ।
पीडित किशोरीकी आमाका अनुसार तीन महिनाअघि ब’ला
त्कार भए पनि आरोपित युवकहरूले ज्यान मार्ने धम्की दिएर तर्साएका कारण किशोरीले आफूमाथि भएको कुकर्मबारे कसैलाई पनि जानकारी गराउन सकेकी थिइनन् । तर महिनावारी (रजस्व’ ला) रोकिएपछि किशोरीले यसबारे आरोपित युवकहरूलाई भेटेर आफू गर्भवती भएको बताएकी थिइन् । त्यसपछि ती दुवै युवकले शनिबार राति उनलाई जबरजस्ती डाक्टर महतोकोमा लगेर गर्भ’ पतन गराएको बताइएको छ ।
Prevस्था’नीयको घरमै घुसेर प्रहरीले लाठी चा’ र्ज गरेको बिषयमा बल्ल बोले मेयर बालेन (भिडियो सहित)
Nextबालेन साहको राजीनामा माग्दै यतिसम्म भन्न भ्याए मुकुन्द घिमिरेले..
भरतपुर महानगरपालिकामा ७६ हजार मत गन्दा रेनुको तिब्र रूपले बढ्यो अग्रता